06/02/2006: Submitted for publication via web
XAQ-U-DIRIRKII AAN XUDUUDDA LAHAYN: Ibraahin Sheekh Saleebaan (Qormada 2aad)
1944kii – 2006da
Ibraahin wuxu ahaa halabuur curin iyo farshaxanba lagu majeerto. Been ku hadli maayo haddii aan idhaahdo haldoorka Jabuuti ayuu ahaa oo cidna laba kuma ahayne, raqamka koowaad ayuu ka ahaa. Heerarka Soomaaliyeed marka aynu u nimaadno, Ibraahin foolaadka xulka ah ayuu ku jiray. Gude iyo dibad maansooyinkiisa, heesihiisa iyo Riwaayadihiisuba waa ay maaxeen.
Dhammayn kari maayo e’, bal aan mid iyo laba kasoo qaato Riwaayadahiisa caan-baxay:
1. Nolol geeridu dhaanto,
2. Marti in aad Ilaahay u tahay,
3. Halgankii ummadda iyo hoog Isticmaar,
4. Ragow aarsi haween u adkaysta markiinna,
5. Waa la moodaye, ma aha,
Maansooyinkiisa halkan kuma wada tixi karayo e’, bal aan heesaha wax aan badnayn kasoo garoocdo. Hoobalkii codkiisa malabku cawryay ee Maxamed Mooge ayaa intaba ku luuqeeya. “Dadka ha iska weyneyn”, waa koow, “Maxaa deyr-cad”, waa laba, “Waagoow dhakhsoo”, waa saddex. Miyaan sii wadaa. Mar kale ayaan isku deyi in aan ku soo noqdo.
1. Sahra jaamac oo leh 2 gabdhood iyo hal wiil,
2. Saado Ibraahin oo leh 5 gabdhood iyo 3 wiil,
3. Maryan Maxamed oo leh 2 gabdhood iyo 3 wiil,
Waa sagaal hablood iyo toddoba wiil iyo hooyooyinkood. Waxa kale oo uu Ibraahin ifka kaga tegay Diiwaankii Maansooyinkiisa. Maa-shaa Allaa. Ilaahay ha ka abaal-mariyo.
Ibraahin wuxu noolaa nolol hodan ah oo uu kaga soo qayb-qaatay halgankii Jabuuti iyo kii dibuxoreynta Qaran ee SNM horseedka ka ahayd. Af iyo addinba wuu ku dagallamay, waxaanu ahaa qof aragti cad oo muuqata ka lahaa labadaa halganba. Ma ay ahayn aragti qarsoon oo isaga ku kooban, bal se waxay ahayd mid ku dheehnayd suugaantiisii iyo curintiisaba oo si fudud looga daalacan karo. Intiinna taqaannay mooyaane, waxaan jeclahay in aan intiinna kale idin baro Ibraahin Sheekh Saleebaan aniga oo idiin kala dab qaadaya. Run ahaantii Ibraahin ayaa is-kiin baraya, bal se doorka aan is-barashadan ku leeyahay ayaa noqonaysa in aan idiin soo qabto hadba tuduc ka mid ah maansooyinkiisa si aad u garataan aragtidii uu nolosha iyo halgannadii is-daba joogayba ka lahaa.
Waxaan adeegsanayaa Maanso uu ugu wanqalay DIRSOOC oo uu ka tiriyay Shirweynihii 6aad ee SNM, 2dii bishii Abriil 1990kii, kaas oo ku qabsoomay meel woqooyi kaga beegnayd Balli-gubadle.
“Maansooy nin kugu duul,
Kaa dhigay def looo tumo,
Aduu kuu direysy yahay,
Ku dardaarmayuu yidhi,